सामाजिक Archives - Page2of3- Infopana
सरकार र डा केसी बीच भएको सहमति
July 28, 2018 infopana 0
डा. केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच सात बुँदे सहमति, केसीले आजै अनशन तोडदै
July 26, 2018 infopana 0
२७ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीले सात बुँदे सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा बिहीबार भएको वार्ता सात बुँदे सहमति गरेर टुंगिएको हो । सहमतिको […]